नायिका साम्राज्ञी लक्ष्मी शाहलाई बेलायतले भिसा दिएन, किन ? - TV Annapurna
पछिल्लो समयमा व्यस्त मानिएकी नायिका साम्राज्ञी लक्ष्मी शाहलाई बेलायतले भिसा दिन अस्वीकार गरेको छ । भिसाका लागी आवेदन दिँदा शाहले भिसामा नपाएपछि ठूलो बजेटमा निर्माण भैरहेको फिल्म ईन्टु मिन्टुको लण्डनमा हुने भनिएको छायांकन रोकिएको छ ।
काठमाडौं र लन्डनमा छायांकन हुने यो फिल्ममा साम्राज्ञी मुख्य भूमिकामा छिन् । साम्राज्ञीले नेपालस्थित बेलायती दूतावासमा भिसा आवेदन दिनु अगाडि नै फिल्मको निर्माण घोषणा गरिएको थियो ।
बेलायतले भिसा नदिँदा साम्राज्ञीले ए मेरो हजुर २ को प्रमोशनमा राम्रै दौडिने समय पाएकी थिइन् । ‘इन्टु मिन्टु लन्डनमा’को छायांकनका लागि बेलायत जान नपाएपछि अहिले उनी नेपालमा नै छिन् । के कारणले शाहले बेलायतको भिसा पाईनन् भन्ने खुलेको छैन् ।
प्रतिनिधिसभा र प्रदेशसभा निर्वाचनमा को बलियो, वामपन्थी कि प्रजातान्त्रिक ?
कोहार जातिको पुख्र्यौली पेसा संकटमा, कोहारहरु बैकल्पिक पेसाको खोजीमा